(Akhriso xogta) RW Kheyre, Fahad Yasin iyo Xasan Farmaajo oo xaraashaya dhagaxii laga helay Ceel Cali - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Akhriso xogta) RW Kheyre, Fahad Yasin iyo Xasan Farmaajo oo xaraashaya dhagaxii...
(Akhriso xogta) RW Kheyre, Fahad Yasin iyo Xasan Farmaajo oo xaraashaya dhagaxii laga helay Ceel Cali
RW Kheyre, Fahad Yasin iyo Xasan Farmaajo oo masuul ka ah MW Farmaajo ayaa xaraash u geynaya dhagaxii laga helay Ceel Cali dalka Qatar dhammaadka bisha April 2020
Waxaa dhowaanahan kala socoteen baraha bulshada iyo wareysiyo iyo wadahadal la xiriira dhagax laga helay Ceel Cali oo ka tirsan Gobolka Hiiraan kaasoo da’diisa lagu qiyaasay in ka badan 240 milyan oo sano.
Haddaba dhagaxaas ayaa la keenay magaalada Muqdisho horraantii bishii Janaayo ee sanadkan 2020 waxaana gacanta ku haya Agaasimaha NISA Fahad Yasin.
Fahad Yasin ayaa u yeeray quburo waxaana arrintan ka kaalmeeyay sida MOL loo xaqiijiyay dowladda Qatar, kuwaasoo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho 14 bishii Febraayo 2020. Qubarada oo isugu jiray Ingiriis iyo Morocco ayaa waxaa aay qaadeen jab ka mid ah dhagaxaas (Sample) kaasoo la geeyay jaamacadda Oxford University dalka Ingiriiska.
Dhagaxa ayaa la sheegay in uu yahay Meteoroid kaasoo baaritaankiisa aay Jaamacadda Oxford u gudbiyeen hay’adda NASA ee dalka Mareykanka. NASA ayaa sheegtay in dhagaxaas uu yahay mid aad muhiimad gaar ah u leh in wax badan laga ogaado taariikhda Adduunka aaynu ku leenahay, waxayna sheegeen in dhagaxaas uu ka mid yahay haraagii dhagax weyn oo dunida u kala qeybiyay qaarado. Dunida aaynu ku nool nahay ayaa markii hore ahayd mid isku wada dhagan, balse markii uu dhagaxaas (meteorioid) ka ah uu dunida ku soo dhacay u kala jaray qaabka aay hadda dunida u sameysan tahay.
Maxaadan Ogeyn oo hadda aay damacsan yihiin Fahad Yasin & Xasan Cali Kheyre
Fahad Yasin & Xasan Cali Kheyre ayaa ogaaday in haddii dhagaxan la iibiyo uu qiimo ahaan gaarayo inta u dhexeysa $100 ilaa $150 Milyan oo doollar, waayo dhagax taariikh fac weyn leh, mana jiro dhagax culeyskiisa intaa la egyahay oo adduunka laga helay.
Dhagaxan ayaa la sheegay in uu yahay ilaa 7 ton culeyskiisa, kaasoo ka dhigaayo dhagaxii ugu weynaa ebed ee samada ka yimaada.
Dhagaxa Yaa leh? Dhagaxan ayaa wuxuu weligii yaalay tuulada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan waxaana dadka deegaanka ay dhagax ka sameysan jireen middiyo iyo qalabka wax lagu gooyo sida misaar iwm.
Koox dhalinyaro ah ayaa ogaaday in dhagaxan uu ka duwan yahay dhagxaantii ay hore u arki jireen waxayna qeyb yar oo aay ka jareen dhagaxaas u qaadeen dalka Imaaraadka halkaasoo loo sheegay in dhagaxan uu yahay nooca meterioud ka ah ee samada ka soo dhaca, balse markii aay sheegeen in dhagaxa uu yahay mid aad weyn oo gaaraya ilaa 7 ton loo sheegay in qiimo ahaan uu kor u dhaafayo ilaa $50 Milyan.
Dhallinyaradii ayaa ku wargeliyay kiiskan ganacsato deggen dalka Imaaraadka kuwaaso markii danbe qeyb ka noqday mashruuca dhagaxan. Dhalinyaradii ayaa dib ugu soo laabtay tuulada Ceel Cali waxayna lacag dhan ilaa $400 kun oo doollar ay siiyeen kooxda Shabaab taasoo markii danbe u ogolaatay in dhagaxa ay u qaadaan magaalada Muqdisho.
Markii dhagaxa laga qaaday tuulada Ceel Cali ee ay ogaadeen siyaasiyiin iyo shacab ka so jeeda Gobolka Hiiraan ayaa waxaa dhagaxii uu noqday mid aad loogu hadal hayo dalka oo dhan.
Markii dhagaxa la keenay magaalada Muqdisho ayaa waxaa si awood dowladed ah ula wareegay Fahad Yasin, Xasan Cabullaahi Farmaao & RW Kheyre oo hadda gacanta ku haya isla markaana la filaayo in dhagaxa loo qaado dalka Qatar dhammaadka bisha April 2020 si loo geliyo (AUCTION) ama xaraash aay sameyneyso dowladda Qatar sida MOL loo xaqiijiyay.
Waa Maxay Dhagaxa Meteoroid ka?
Meteoroids-ka waa dhegxaan inta badan ka yimaada dhinaca cirka oo cabirkoodu kala duwan yahay. Markay meteoroids ku gasho jawiga dhulka (ama kan meera kale, sida Mars) xawaare sare iyo gubasho, guluubyada dabka ama “Xiddigaha toogashada” ayaa loo yaqaannaa meteors.
Marka meteoroidku ka badbaado safarka dheer ee hawad oo uu ku dhacdo dhulka, waxaa la yiraahdaa meteorite.
Qiimaha meteorite-ka birta ee caadiga ah guud ahaan waa inta u dhexeysa $ 0.50 illaa US $ 5.00 halkii garaam. Meteorites dhagax waa mid aad u khafiifa waxaana lagu qiimeeyaa US $ 2.00 illaa US $ 20.00 halkii garaam cabirku inta badan. Maaha wax aan caadi ahayn in sheyga runti yaraaday uu ka sarreeyo US $ 1,000 halkii garaam
Nabaad-guurka iyo xoogagga kale sida dhalaalidda dhagxaanta ku dhacdaa kadib, ma jiraan dhagxan dhulka maanta jirta oo sidii hore u jiri jirtay. Meteorites waa qaali sababta oo ah asal ahaan kama iman dhulka aad beyna u qiimo badan yihiin baahida dalabka ku uruuriyana waa badan yahay.
Previous articleMadaxweynaha Hirshabeelle ayaa shir looga hadlaayo Amniga Gudoomiyay
Next article(Communique) Inside Al-Shabaab’s “crisis conference” amid US military airstrikes in Somalia